Iimpawu kunye nendlela yobomi be-crab eluhlaza okwesibhakabhaka | Ngeentlanzi
IiCrustaceans zizilwanyana ezinemibala kwaye zaziwa kwihlabathi liphela. Kukho iintlobo ezininzi ezixhomekeke ikakhulu kwii-crustaceans ekudleni kwazo. Enye yee-crustaceans ezitsala umdla omkhulu yi Unonkala oluhlaza. Ngokungafaniyo nabanye oononkala, umbala abanayo awuyiyo eyendalo, ke ngoko umi ngaphandle kakhulu. Nangona ingekahlelwa njengezilwanyana ezisengozini, oononkala abaninzi bayafa yonke imihla ngenxa yongcoliseko lweelwandle nemilambo ngenxa yemisebenzi yabantu.
Ngaba uyafuna ukwazi iimfihlelo ze-crab eluhlaza kunye neenqabileyo zayo? Kule nqaku sichaza yonke into kuwe.
4 Ukondla nokuzala ngononkala oluhlaza okwesibhakabhaka
Olu hlobo lunobuhle obungenakubalwa obunikwa ngulo mbala uluhlaza okwesibhakabhaka wangaphandle. Kukho ezinye iindidi ezinokuthi zibe luhlaza okwesibhakabhaka, ithambo, iorenji, okanye ipinki. Le mibala ingaqhelekanga yenza ukuba unonkala oluhlaza okwesibhakabhaka uqondwe kwiindawo ezininzi zehlabathi.
Olunye umahluko ophambili onalo unonkala kunye nokunye keel yangaphandle. Le keel iqulethe ezinye ezine ezingachazwanga kakuhle kumphezulu we-carapace. I-chelas zigqunywe ziinwele ezintle ngaphakathi. Inkqubo ye- Unonkala womlambo ihlala inentloko kunye namalungu angaphakathi agqunywe liqokobhe. Oku kukhusela nakweyiphi na isehlo okanye ingozi kuzo zombini i-ikhosistim apho ihlala khona kunye nokuhlaselwa kwaso nasiphi na isilwanyana. Amacandelo esisu agqunywe lilungu eliguqukayo elibanceda ukuba bahambe ngokulula ngelixa bekhuselekile.
Unonkala unamazipho amabini amakhulu ngaphambili. Zibaluleke kakhulu kubo kuba beqhele ukutya, bembe ukuya kwiimitha ezimbini ubunzulu kwaye bazikhusele kumarhamncwa anokubakho. Isibini sezibambiso sandulela isibini semilenze esiyisebenzisayo ukuhamba kunye nezinye izibini esizisebenzisayo ukudada. Le milenze ibizwa ngokuba yi-pleopods. Zihlala zigutyungelwe ziinwele ezintle ezisebenza ukulungisa amaqanda kuyo.
Inezibini zamehlo ekupheleni kwezihlomelo. Zombini incasa kunye nokuchukumisa zibonwa zizibini zeetende ezinkulu. Ukuba zikwimo entle yempilo kunye nokutya, zinokuba phakathi kwama-25 nama-30 cm ubude kwaye zibe nobunzima kwikota yekilo. Ngama-20% kuphela ubunzima bayo bonke ngumsila.
Phakathi kwendoda nebhinqa kukho umahluko ocacileyo. Eyokuqala kulapho kufumaneka khona ii-pores zesini. Kwimeko yabasetyhini, ibekwe ngokukodwa kwisiseko sesibini semilenze. Ubume bayo bu-ovoid kwaye buyabonakala. Kwelinye icala, kwindoda sifumana ilungu kumgangatho wesibini semilenze.
Kukho ezinye izinto ezahlukileyo ezicace gca nekulula ukuziqonda. Umzekelo, inkunzi inkulu kunemazi kwaye ineenzipho ezomeleleyo. Umfazi unexesha elide kuneyendoda.
Ezi zilwanyana, njengoko zikhula, zenza utshintsho kwi-exoskeleton. Ngokuqhelekileyo kwenziwa kanye okanye kabini ngonyaka kwiimpawu zabantu abadala. Xa unonkala oluhlaza okwesibhakabhaka ushiya iqokobhe elidala, uginya amanzi isixa esithile ukuze ugcwalise ngaphakathi kwaye ukwazi ukwandisa ubungakanani. Le yindlela ivumela ukuba ube nomthamo owaneleyo womzimba ukuphucula ngcono ubunzima bemisipha kunye namanye amalungu angaphakathi.
Nje ukuba bagqibile ukuphalaza i-exoskeleton, Kuya kufuneka bayenze lukhuni iqokobhe kancinci ngokusebenzisa ikhalsiyam abayingenisileyo ngokutya.
Unonkala oluhlaza okwesibhakabhaka uhlala enovakalelo kutshintsho lwemo engqongileyo kwindawo ahlala kuyo. Ngaphandle koku, ukukwazi kwayo ukuziqhelanisa nezinto ezahlukeneyo kuyivumele ukuba iphile kwiindawo ezahlukeneyo zokuhlala. Zihlala zifumaneka kwimimandla esezantsi apho kukho uxinzelelo oluphezulu lwamanzi njengamadama, imilambo, imigxobhozo, amaqula, amadama. Bakhetha amanzi acocekileyo anamaqondo obushushu ahlukeneyo kuba enezinga eliphezulu kwaye kukho ukutya okuninzi.
Enkosi kwinto yokuba inokuziqhelanisa neemeko ezahlukeneyo zokusingqongileyo, sinokuyifumana kwimithombo eshushu nakumachibi anamanzi abandayo kakhulu. Iimpawu zayo zikunika izibonelelo zokuba ukwazi ukusinda kwimbalela. Kungenxa yokuba banokungcwatywa eludakeni kwaye bonwabele ukufuma. Nje ukuba bangcwatywe, bayakwazi ukuhlala bekwimeko yokudinwa enokuhlala kude kube ngunyaka omnye ukuba kunyanzelekile.
Ukondla nokuzala ngononkala oluhlaza okwesibhakabhaka
Kuba ifumaneka kuninzi lweendawo zokuhlala, itya inkunkuma eyahlukeneyo kunye nentsalela. Ingatya i-algae, ezinye izilwanyana ezingenamqolo zasemanzini, njl. Ziyi-omnivores, ngoko abanayo ingxaki enkulu yokutya. Bahlala benamathuba kwaye basebenzise ithuba lokungahoywa okanye utshintsho kwindawo zokuhlala ukondla. Ukutya kwabo okwahlukeneyo kubandakanya iimbaza, iminenke, iintlanzi, amasele, izityalo, inyama efileyo, ezinye oononkala, kunye nononkala abancinci abancinci.
Inyaniso yokuba esi silwanyana sinokuba lidla yinto engekho rhoqo. Kwenzeka kuphela ukuba ukunqongophala kokutya kuphezulu kakhulu. Kuyenzeka xa baziva benyanzelwa zizilwanyana zohlobo olunye kwaye "bevalelwe" kwiindawo zabo zokuhlala. Ukongeza koku kungasentla, banokutya ezinye izinambuzane nge-zooplankton kunye nokutya kwiidiatom.
Ngokumalunga nokuzala kwayo, ihlala inomjikelo wobomi omfutshane kakhulu, ke ukukhula kwayo kuyakhawuleza, njengokuzala kwayo. Banokuzala okuninzi kwaye bafikelela ekuvuthweni ngokwesondo kwiminyaka emi-4 ubudala. Imazi izala amaqanda xa ingakakhuli kakhulu, ngenxa yoko ifuna ukukhathalelwa ngumama ukuze ikhule.
Ukuzaliswa kwakhona Imiswe ngobude bemini kunye nobushushu apho amanzi akhoyo. Ukutshatisa kunokuba sentwasahlobo, xa amaqondo obushushu enyuka kwaye iintsuku zinde.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi malunga nononkala oluhlaza kunye neempawu zayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » abanye » Unonkala oluhlaza